Isbitalkii deegaanka Godinlabe oo dib loo howlgaliyay”sawiro” – Radio Muqdisho
Isbitalkii deegaanka Godinlabe oo dib loo howlgaliyay”sawiro”
Munaasabadda dib loogu furayay Isbitalka deegaanka Godinlabe oo 30-km jihada koonfureed ka xiga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka qeyb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo bahda caafimaadka iyo maamulka deegaanka.
Xabiibo Xassan Gudoomiyaha Ururka Haweenka Godinlabe ayaa munaasabadda ayaa sheegtay inay sanado badan ka shaqaynayeen sidii Godinlabe xarun caafimaad u heli lahayd, qarash badana ay ku bixiyeen dib u hergelinta xaruntan caafimaad.
Gudoomiyaha Godinlabe ee maamulka Ximan iyo Xeeb Cabdiyare Macalin Qase ayaa sheegay in tani ay tahay waxqabad bulsho oo muuqda, waxaana uu ammaanay ururada bulshada Godinlabe dadaalka ay sameeyeen.
Xiriiriyaha hawlaha caafimaadka Ximan iyo Xeeb Dr Maxamed Cumar Yuusuf ayaa sheegay in Isbtalkan loo qaatay 19-shaqaale caafimaad ah, dhawaana ay Dhaqtar keeni doonaan, waxaana u u mahadceliyay Save the Children oo dawada iyo mushaaraadka shaqaalaha Isbitalka bixinaysa.
Isbitalkan oo ay Haweenka Godinlabe oo qurbajoogta kaashanaya ay dhiseen ayaa gubtay dhamaadkii 2013-da, hase ahaatee dadaal ka dib ayaa maanta dib loo howlgaliyay.
Agaasimaha Guud ee Boostada iyo Isgaarsiinta oo ka qeybgalay shir ka dhacay Addis-ababa